Dhulgariir xooggan ayaa ku dhuftay jasiiradda Sumatra ee dalka Indonesia
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Indho Indho Indoneesiya » Dhulgariir xooggan ayaa ku dhuftay jasiiradda Sumatra ee dalka Indonesia
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Indho Indho Indoneesiya • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhul gariirkaasi oo dhacay saqdii dhexe ee xalay saqdii dhexe ee saacada dalkaasi (5pm GMT).
Indonesia waxaa gilgilay kumanaan dhulgariir sanadkii.
Jasiiradda weyn ee Indonesia ee Sumatra waxa ku nool in ka badan 58 milyan oo qof.
Dhulgariirka ayaa cabirkiisa lagu sheegay 6.2 magnitude, mana jirto wax digniin ah oo ka soo baxay tsunami oo la soo saaray.
Hay’adda Sahanka dhulka ee Maraykanka (UGS) ayaa sheegtay in dhulgariir xooggan oo cabbirkiisu dhan yahay 5.9 lagu dilay meel u dhow jasiiradda waqooyi-galbeed ee Indonesia. Sumatra maanta.
Sida laga soo xigtay IndonesiaHay'adda Saadaasha Hawada, Cimilada, iyo Geophysical, dhulgariirku wuxuu cabbiray 6.2-magnitude.
Ma jiro wax digniin ah oo Sunaami ah oo laga soo saaray barakicinta dhulgariirka.
Jasiiradda weyn ee Sumatra waxa ku nool in ka badan 58 milyan oo qof. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhul gariirkaasi oo dhacay saqdii dhexe ee xalay saqdii dhexe ee saacada dalkaasi (5pm GMT).
Ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii 6.2-kii October dhul gariir uu ku dhuftay Jaziirada caanka ah ee Bali ee dalka Indonesia waxaana ka dhashay dhul go’. Dhulgariir weyn oo cabirkiisu ahaa 100 ayaa ku dhuftey jasiiradda bishii Janaayo, kaas oo burburiyey dhismayaal badan, oo uu ku jiro isbitaal, wuxuuna sababay in ka badan XNUMX dhimasho ah.
Waxay ku yaalliin gobol lagu magacaabo Giraanta Dabka ee Baasifigga - aag qaabaysan oo leh dhaqdhaqaaqyo badqabid ah - Indonesia waxaa gilgila kumanaan dhulgariir sanadkii.